डा। सकीना याकूबीलाई २०१ for WISE पुरस्कार शिक्षा - विश्व शिक्षा अभियान शिक्षाको लागि पुरस्कृत गरियो
उनको महारानी शेखा मोजा बिन्त नासेरले शिक्षाका लागि डब्लुआईएसई पुरस्कार डा। सकेना याकूबीलाई प्रदान गरे।
क्वाटर फाउन्डेशन: शिक्षाका लागि विश्व इनोवेशन शिखर सम्मेलन (WISE)
उनको Highness Sheikha Moza Bint Nasser शिक्षाको लागि WISE पुरस्कार प्रदान डा। साकेना याकूबी माशिक्षाको लागि सातौं विश्व नवीनता शिखर सम्मेलन दोहा, कतार नोभेम्बर,, २०१ on मा।
शिक्षाको लागि WISE पुरस्कार पाउँदा डा। याकूबले भने, "म यस वर्ष शिक्षा पुरस्कार विजेताको WISE पुरस्कारको रूपमा छनौट गरेकोमा ठूलो सम्मान र धन्यको महसुस गर्छु। यो विशेष गरी अर्थपूर्ण छ किनकि यो अफगानिस्तानमा यस्तो महत्वपूर्ण समय हो। मेरा मानिसहरू आतंक र गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। तिनीहरू दु: ख पाइरहेका छन् र निराश छन्। यद्यपि यस पलमा एक प्रकाश देखा पर्‍यो। यो पुरस्कारको साथ, हामीलाई थाहा छ कि हामी अझ बढी अफगानीहरूलाई शिक्षा दिन जारी राख्न सक्छौं, तिनीहरूलाई आशा दिदै उनीहरूलाई जेसुकै भए पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने। यो मेरो लागि ठूलो उपहार हो, र म पुरस्कार अफगानी अफर्नी इन्स्टिच्युट अफ लर्निंग र सबै महिला, पुरूष र केटाकेटीलाई पढाउँदैछु। ”
डा। याकुबीका लागि यो शिक्षा हो न कि बन्दुकले समाज परिवर्तन गर्न सक्दछ। उनी विश्वास गर्दछन कि समुदायमा आधारित, समग्र दृष्टिकोणले सम्मानजनक वातावरणलाई बढावा दिन, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न र सबैको लागि स्वास्थ्यसेवा प्रबर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण छ।
अफगानिस्तानको शिक्षाकी आमाको रूपमा चिनिने 65-वर्षीया याकूबीले विगत दुई दशकहरु दशकको युद्धले ध्वस्त भएको आफ्नो देशको शैक्षिक परिदृश्यलाई पुनर्निर्माण गर्न लगातार काम गरिरहेकी छन।
यो सबै नब्बेको दशकको शुरुमा शुरू भयो, जब सकाना याकूबीले पाकिस्तानको अफगानी शरणार्थी शिविरहरूमा काम गर्न थाले। एक उत्कट शिक्षक आफैंले, उनले शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिइन्, बालबालिकाको लागि विद्यालय खोले, र महिलाहरूका लागि शिक्षा केन्द्रहरू। सन् १ 1990 1995 ० को बीचमा तालिबानको शासनले डा। याकूबीलाई महिला र बच्चाहरू, विशेष गरी केटीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उनको मिसनबाट रोक्न सकेन। उनले यस कामलाई अगाडि बढाउन सन् १ XNUMX XNUMX in मा अफगानिस्तानको अध्ययन संस्थान (AIL) शुरू गरे। उनको प्राथमिक उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण सुधार र नवीनता थियो। एआईएलका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पाकिस्तान र अफगानिस्तानका अफगानी शिक्षकहरूलाई गुणस्तर, गहन शिक्षामा केन्द्रित छन्। एकपटक शिक्षकहरूलाई शैक्षिक मूलभूत शिक्षणहरूमा तालिम दिइसकेपछि, एआईएलले उनीहरूको शिक्षण कलालाई सुदृढ पार्नको लागि उनीहरूलाई गहिराइमा जान अनुमति दिन कार्यशालाहरू प्रदान गर्दछ।
जब नब्बेको दशकमा तालिवानले केटीहरूको शिक्षा प्रतिबन्धित गर्‍यो, एआईएलले देशभर 3,000००० केटीहरूको लागि भूमिगत गृह विद्यालयहरूलाई समर्थन गर्‍यो। यो देशमा पहिलो महिला संस्थाका लागि शिक्षा केन्द्र खोल्ने पहिलो संस्था पनि हो र केटी र महिलाहरुलाई साक्षरता र व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न निरन्तर नवीनता जारी राख्छ।
उनको नेतृत्वमा, एआईएलले एक ग्राउन्डब्रेकिंग, दूरदर्शी संगठनको रूपमा स्थापित गर्‍यो जुन महिला र समुदायहरूको सशक्त पार्न तल्लो तहमा काम गर्दछ। शिक्षा मा यो तल अप दृष्टिकोण एक स्थायी स्थानीय रूपान्तरण शुरू भयो। यसको स्थापना भएदेखि एआईएलले कम्तिमा १२ मिलियन लाभार्थीहरूको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू पुर्‍याएको छ जुन अफगानिस्तानको ग्रामीण र सीमान्तकृत क्षेत्रमा रहेका छन।
हालसालै, डा। याकुबीले उच्च गुणवत्ताको किफायती शिक्षा प्रदान गर्न आफ्नै नाममा निजी विद्यालय खोले। उनले टाढाको इलाकामा बस्ने मानिसहरूलाई आफ्नो संस्थानको शैक्षिक सामग्री पुर्‍याउन रेडियो स्टेसन पनि स्थापना गरिन्। उनको भविष्य योजनाहरु मा एक टेलिभिजन नेटवर्क को निर्माण र महिलाको लागि एक विश्वविद्यालय पनि समावेश छ।
“अफगानिस्तानका लागि मेरो दृष्टिकोण एक स्वतन्त्र देश हो, त्यहाँको समाज जहाँ सबै शिक्षित छन्। प्रत्येक एकल केटी अफगानिस्तानमा शिक्षित हुनुपर्दछ - त्यो मेरो सपना हो। मसँग सानो सपना छैन। मेरो दृष्टिकोण ठूलो छ, ठूलो भएको छ र लगातार ठूलो हुँदै गइरहेको छ। र मलाई लाग्छ कि त्यहाँ त्यस्तो दिन आउँदैछ जुन यो देश खडा हुनेछ, र म त्यो दिन खोज्दैछु, ”डा। याकूबी भन्छन्।
शान्ति शिक्षाको लागि "नयाँ" ग्लोबल अभियान: शान्तिको लागि जानबूझिएर, दिगो र व्यवस्थित शिक्षाको अनुसरण गर्दै
हेग अपील शान्तिको लागि: युवा र आशाको कथा
वैश्विक शान्ति (मलावी) को लागी umanhu शिक्षण
मार्च 10, 2016 समाचार र हाइलाइटहरू 1
२०१० देखि यस लेखमा, स्टीभ शाराले मलावीको दृष्टिकोणबाट कसरी शान्ति परिभाषित गर्न र बुझ्नको लागि देशको प्राथमिक विद्यालयको कक्षा कोठाबाट अन्तरदृष्टि साझा गर्दछ। “मैले २०० 2010 मा मालावीको कक्षा कोठामा शान्ति शिक्षाको लागि अध्ययन गर्ने सात महिनाको अवधिको शुरुआत गर्दै गर्दा मेरो एक साथीले मेरो अध्ययनको विषयमा धेरै छक्क परे। किन शान्ति शिक्षा? उनले सोधिन्। के मलावी युद्धमा छिन्? मलाई कस्तो प्रतिक्रिया भयो भनेर मलाई बिल्कुल याद छैन, तर मलावियन स्कूल प्रणालीमा शान्ति शिक्षाको प्रश्न आज मलाई त्यस्तै सान्दर्भिक देखिन्छ जस्तो छ वर्ष पहिले थियो। र हुनसक्छ हामीले पहिलो पटक १ 2004 .1964 मा स्वतन्त्रतामा आफ्नै शिक्षा प्रणालीको विकास गरिसकेका छौं। सेप्टेम्बर २१ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस हो, र यस वर्षको विषयवस्तु (२०१०) भनेको 'युथ फर पीस एण्ड डेभलपमेन्ट' हो। यस दिनको अवलोकन गर्दा मलाई २०० 21 मा मलावीको कक्षा कोठामा जाँदा र मलावियन प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले हामी कसरी मलावीको दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न र बुझ्न सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा कुरा गरेको कुरा सम्झँदा मैले सोचेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
नयाँ प्रकाशन - "मौसम परिवर्तन परिवर्तन गर्दैछ: दक्षिण एशियाबाट शिक्षा"
मार्च 16, 2021 प्रकाशन 0
आशा हंस, नित्य राव, अंजल प्रकाश, र अमृता पटेल द्वारा सम्पादित यस पुस्तकले दक्षिण एशियामा विभिन्न भौगोलिक र सामाजिक सन्दर्भमा वातावरणीय परिवर्तनको लिnd्ग अनुभवहरू र जलवायु परिवर्तनशीलतामा अनुकूलन गर्ने विभिन्न रणनीतिहरूमा केन्द्रित छ। खुला पहुँच अब उपलब्ध छ! [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
शान्ति निर्माण कार्यका लागि युवा तयारी गर्दै: केहि सिद्धान्त र विचार
जुलाई 1, 2015 विशेषताहरु 0
मेगन चाबलोवस्की ग्लोबल पीसबिल्डिंग सेन्टर, युएस इन्स्टिच्यूट अफ पीस ([ईमेल सुरक्षित]) (फिचर गरिएको लेख: मुद्दा # १२२ जुलाई २०१ 122) २०१० मा युगान्डाका दुई जना मानिस, नुग्वा हसन र अहमद हदजी घाइते भए [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]